एमाले सांसदको ‘टोकाइबाट’ संसद सचिवालयमा कार्यरत मर्यादा पालक गम्भिर घाइते ! – GALAXY
एमाले सांसदको ‘टोकाइबाट’ संसद सचिवालयमा कार्यरत मर्यादा पालक गम्भिर घाइते !
काठमाडौं, । शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले रमिता देखाइदिए । संसदीय मर्यादा कायम गर्न भन्दै उनीहरुले नाराबाजी मात्रै गरेनन् कुर्सी फोड्नेदेखि माइक भाँच्नेसम्म्का अराजक गतिविधि गरे ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले दिउँसो १ बजे बैठ बोलाएका थिए । राष्ट्रिय गान पछि बैठक सुचारु नगर्दै एमाले सांसदहरु रोष्टम घेर्न दौडिई हाले । एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी सबैभन्दा पहिले दौडिएर रोष्टम घेर्न पुगेकी थिइन् ।
यी हुन् संसदमा मर्यादा पालकको पाखुरा टोक्ने एमाले सांसद (बयानसहित)
एमाले सांसदहरुले शुक्रबारको बैठकमा सभामुखलाई औँला ठडाउँदै पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, संसदीय मर्यादा कायम गर, विधिको शासन लागु गर, कानुनी सर्वोच्चको लागु गर जस्ता नारा लगाएका थिए । तर, सांसदमाथिको कारबाही सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
उक्त मुद्दा बारे संसदमा छलफल समेत गर्न नपाईको कानुनी व्यवस्था छ । यद्धपी एमाले सांसदहरुले कानुनी मर्यादा पालना गर्न भन्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।
शुक्रबारको संसदमा भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिष्थापन विधयक मार्फत बजेट समेत ल्याए । विधयक लिएर संसद जान लागेका शर्मालाई रोक्ने कोशिस गरेपछि उनी दौडिएरै रोष्टममा पुगेका थिए ।
यता एमाले सांसदहरु भने ६ तहको मर्यादा पालकमाथि चढ्नेदेखि माइक भाँच्ने सम्म गर्न पुगे । सांसदहरुले केही मर्यादा पालकको हातमा टोकेको समेत पाइएको छ । एमाले सांसदको टोकाईबाट एक जना मर्यादा पालक गम्भिर घाइते भएको प्रहरी विशेष सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
‘नाराबाजी भइरहेका बेला एक जना सांसदले हाम्रा एक मर्यादापालकको हातमा टोकेको समेत पाइयो । उहाँको टोकाइबाट एकजना साथी गम्भिर घाइते हुनु भएको छ । उहाँलाई सामान्य औषधी लगाइको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
उनको भनाई पुष्टि गर्ने तस्विर समेत फेला परेको छ । कान्तिपुर दैनिकका लागि अंगद ढकाले कैद गरेको तस्विरमा एमाले सांसदले मर्यादा पालकलाई टोकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।शुक्रबारको संसद बैठकमा एमाले सांसद रेखा कुमारी झाले गृहमन्त्रीको माइक झिकेर अर्थमन्त्रीको टाउको फुटाउने कोशिस समेत गरेकी थिइन् ।